Ma lacagteyduu jeclaa mise aniga ayuu i jeclaaa???? Q- labaad | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
Ma lacagteyduu jeclaa mise aniga ayuu i jeclaaa???? Q- labaad
Waxaa la garay gabagabadii sanadkii ugu danbeeyay waa lakala tagi rabaa. Qof walba qorshe ayuu leeyahay kii jamacad aadaayo oo wadan kale iyo kii wadanka sii joogi lahaa. Qof walba wuxuu sameen laha buu ka fikiraya
Manta waa malintii ugu danbeysey iskulka.
Ruweyda subax kale ma arkeyso ILyaasna subaxaan ayaa ugu danbeyso aragiisa. Laga yaba in ay jidka isku arkaan lama filaan lakin manta ayaa ugu danbeys ah arakti caadi ah.
Ruweyda si way u faraxsantahay sina way u muruksantahay madama aysan jacelkeeda sheganin hadana aysan subax danbe ay arkeynin.
Ilyaas dhinaciisaba murugtaas wey ka jirtaa lakin muxuu qaban karaa jacelkiisa ma soo bandhigi karo wuu cabsanayaa.
Ruwayda waxay isu diyarineysaa qalin jibinta dugsiga sare walidinteeda aad bey u faraxsaniyiihin. Madama ay dhameneyso gabartooda.wey isu soo wada raceen xafladii qalin jibinta
xafladda ayaa dadka dhan isku wada yimadeen. Sida caadada aheyd waxa lagu furey ayadaha QURANKA. KAdibna mamulaha iskula ayaa qatay hadalkii. Mahad naq kadib wuxuu dhahay hadana waxa la shegayaa ardayda kalmaha sida ay u kala galeen iyo shahadoyinkooda.
Kalinta ugu horeysa markii lagu dhawaaqay Ruweyda Axmad Maxamad. Ruweyda aad bey u faraxday ma aysan fileenin kalinta kowad tii lawad ama sedexad bey fileesay. Walidiinteedana aad bey ugu farxeen gabartooda sida ay u dadaashay.
Maamulaha ayaa xogaa ka hadlay Ruweyda in ay tahay gabar lagu daydo. Dhinac walba ay ka fiicantahay xaga wax barashada iyo xaga aqlaaqdaba. Malintaas iskula wuxuu ku dhamaday farxad iyo macasalameys oo qof walba qofka kale ku leeyahay saxiib waa kuu xisi doona. Aan iska war hayno yaa la is goynin.
Ruweyda gurigii markay imaday ayada iyo walidinteeda. Waxa loo sheegay in ay jaamacada dibada ku dhigan doonto oo ay safar tahay. Ruweyda aad bey u sii naxday ayadoo ka naxsaneyd kala tagitaanka ku dhici doona ayada iyo ilyas
Hadana la dhahay wadanka dhan ayaa laga dhoofina. Madiidi karto walidkeeda hadalkooda. Waxey danta ku jirtaa inee ogolaato oo ay ka takto jacelkeeda ayadoon u sheeganin. Ruweyda mar waxay ku fikirta ma u shegata oo farin ma u dirtaa.Marna wey baqdaa oo hadii farintaas dadkale arkaan maxa dhici dono.
Waxay go,aan ku gaartay inee iskaga takto wadanka oo jamacadeeda aado ayadoon u sheeganin jacelkeeda Ilyaas.
Ilyaas asina waxba ma oga oo wuu yabanyahay wuxuu sameena lahaa. Wuxuu ka war helay in Ruweyda u dhoofi rabto Maleesiya. Oo diyarada ay ku qoran tahay beri aroorti. Faro gacanta wey ka baxeen wax lasmee karona malahan xitaa wuu awoodi wayay inuu macsalameeyo.
Ruweyda waxay aadey Maleesiya halkaas ayey ka sii waday wax barashadeeda. Lakin marna jacelkeeda ma hilmaamin oo mar walba wey ka fikiri jirtay.
Sanad iyo bar kadib malin ayey si caadi ah MSNkeeda u furtay waxee araktay warqad ku qorneet SALAAN.
Wey yabtay waa qof aysan garaneenin taloo ya ku soo salamay ayee niyada iska leedahay ayado sii fureeso warqada.
Sidaan ayee ku bilaawatay.
Waa ku salaamay ruweyda abaayo macaan salaan taan ugu qiimaha badan la isku diro sidee tahay xalkaaga. Waxaa filayaa inadan i fahmin oo yabantahay. Waa aniga Ilyaas ma i xasuusata? Wax badan ayaa ku radinayay saan u heli laha MSNkaga. Hada ayaa so helay ee wax yalo badan ayaa raway inaa ku sheego. Fadlan nambarka isoo qor aan ku soo wacee. jawabtada muhiim ayee i tahay walal. Mahadsanid.
Ruweyda farxad ayey meel ay is geeso ayey weysay. Waa wilkii ay dondoneesay oo marnaba qalbigeeda ka bixi wayay. Lakin talow maxaa ka danbeyn doona farxadaan.
Ruweyda msjkii ayee ugu jawabtay ayadoo faraxsan nambarkeedana u qortay.
Malin kadib Ruweyda waa la soo wacay waxaa soo wacay abaheeda oo arin naxtin leh uu wado. Waxaa loo sheegay inuu hooyadeeda geeryootay. Aad bey u naxday oo hoyadeeda aad bey u jecleyd ruweyda xitaa wey suxday. Lawo beri ayey isbitalka ku jirtay
Malinti ay ka soo baxday ayadoo murugsan ayaa talefankeeda soo yeeray. Hello ayey dhahday.
wuxuu ku bilaaway AS walal waa Ilyaas
Ruweyda waxey ugu jawabtay WWW.
Meshii ayey isku salameen Ruweyda waxey u sheektay inee hoyadeeda dhimatay. Aad buu ugu naxay wuxuu dhahay aniga ma ogeen. Wadanka wa ka soo tagay Masar ayaa joga. Jamacad aya ka dhikta.
Sheeko yar kadib Ilyaas wuxuu u sheektay wixii qalbigiisa ku jiray jaceelka uu u qabo Ruweyda. Iyo sida u u dondonaayay. Wuxuu weediyay inee jeceshahay ayadana iney u sheekto.
Lakin Ruweyda waqti xadirkaas waxey dhahdo ayey weysay wee naxday wee awoodi weysay inee dhahdo wa ku jeclahay. Waxay ugu jawabtay kuma jecli aniga ayado girireeso.
Ilyasna markuu maqlay intaas wuu qaracmay oo wuxuu ku hadlo ayuu wayay. Wuxuu dhahay iga raali noqo ee macasalama.
Ruweyda markee taleefanka dhiktay ayee oohin la dhacdey.
waxay ka shalayday sababta ay sidaa u yeeshay. Ilaa hada magaraneeso sababta ay u qarisay jacelkeeda. Lakin waxee go an ku gaartay inee msj u dirto oo ay u sheekto ayadana waxee qalbigeeda ku jiro.
Ilyaas markuu arkay msjkeeda ad bu ugu farxay isla markiina wuu soo wacay.
Ruweyda iyo Ilyas wax badan ayey hadlayeen wax badana wa la isku sheegay. Ilyaas wuxuu u sheegay markii Ruweyda ka taktay in reerka ku qasbeen naak. Ilyaas naak ayuu leeyahay waliba hal gabar ayaa loo hayaa an sanad dhameen. Lakin wuxuu u sheegay inuu ayada jecelyahay hadana u xaskiisa la joogin. Una donaayo inuu furo oo ayada gursado. Ruweyda nafteda ad bey ugu faraxsaneet iney hesho jacelkeeda wax kale ma aysan ka fikireenin. Madama uu hada ILAAHAY u keenay jacelkeeda wey ka aqbashay wuxuu dhahay oo dhan Ilyaas.
Mudo ayey wada socdeen waxaa go,aan lagu gaaray in la is guursado. Oo labadooda yimadaan xamar si waladiinta isku arkaan. Lakin ruweyda aad bey u baqeesay xaga walidiinteeda. Sababtoo ah kow ruweyda waxay ka dhalatay reer lacag leh Ilyasna wuxuu iska ahaa reer iska hoseeyo. Mida labaad reerka Ruweyda caado uma lahan in gabdhahooda niman shisheeyo gursado. Waxay jecelyihiin niman cida ah ama isku qabiil ah. Ilyaasna qabilkeda ma ahan.
Ayadoo dhibkaas jira hadana Ruweyda marwalba waxey ku fkiri jirtay sida ay jacelkeeda u daafici laheyd.
Habeen habeenada ka mid ah ayaa walalkeeda amerka jira soo wacay. Wuxuu u sheegay in ay ruwyda aado Dubay xiliga fasaxa oo ay meshaas ku kulmaan. Ruweyda wee naxday bes walalkeda waxee u sheektay inee rabto inee aado Somaliya. Bes walalkeeda wuu ka diiday. Ruweyda waxey aheyd gabar baari ah marnaba hadalka familkeeda aysan jibin jirin oo wax walbana ka hormarin jirtay.
Ilyaas ayey u sheektay arinta soo kordhay. Asina wuu ka aqbalay.Waxay kalo u sheektay in aysan hada guur diyaar u aheen oo doneeso inee jamacada dhameeso. Lakin Ilyaas wuxuu doonaayay hada. Lakin ayada wey ka diiday kadibna saas ayey go,aan ku gareen.
Ruweyda markii ay Dubay taktay waxa sii xoogsaday xirikooda oo waqti walba wey hadli jireen. Wax yalaha oo badankoda ka doodi jireen wuxuu ahaa markii Ruweyda weydiso Ilyaas in uu ka war hayo inantiisa yareed. Madama usan arkin markii la dhalay. Xita waxey wedin jirtay inuu ka hayo sawir. Lakin Ilyaas ma wici jirin marnaba gabartiisana oo sand jirto sida ay u ektahay xitaa ma yaqaano. Ruweyda waxey aheyd qof calool jilicsan waxey ku talin jirtay gabartiisa inuu xalkeeda ogaado ama la socdo. Madama ay waxa dhacayaan ayadan waxba ka ogeen ay yartahay. Xitaa waxay ku qalqaalin jirtay inuu ka codsado xaskiisa in loo soo diro gabrtiisa sawirkeeda..
Ilyaas marwalba wuxuu ugu jawaabi jiray iska daa dadkaas ada ka muhiim san. Ruweyda fikir ayey kentay oo Ilyaas ayey ula yabantahay qalbi adegaan meshuu ka keenay kuma ogeen sidaan. Mar waxay is dhahdaa adiga danbi ayaa galosaa oo gabar iyo abaheeda aya kala genoosa. Reer dhisan ayaa burburinoosa lakin Ilyaas waxaas dhan kama fikireenin.
Ruweyda dhoor jeer ayee lacag u dirtay Ilyaas inta ay jooktay Dubay. Iyo marna bugaag qaali ah ayuu ka soo dalbaday malinta isku horeesay in jaceelkooda isku sheektaan.wee u diri jirtay wax walba ka codsado. Wuxuu badana u sheegi jiray lacag la,aanta haysato iyo dhibka uu ku jiro. Ruweyda waxay isku dayi jirtay inee ka cawiso hadana wax badan ma awoodi. Ayadaba la biilayaa maxey wax biisha hadana waa arday.
Fasaxee ayaa dhamaday Ruweyda wa inee soo baxdaa oo jamacadeeda ku soo labata
Malin ayuu Ilyaas sawir ka codsaday kadibna wey u dirtay. Waxay dirtay sawir ayada iyo wiil ay walaalo ahayeen Ruweyda. Markuu arkay Ilyaas asigoo wax hubsanin ayoo msj soo diray. Msj aflagaado iyo wax walba ku qoron. Oo ku leeyahay waa maxay nimankaan maxa i qayanee halkaas waxaa u jookta inaa niman shukansato iyo wax yalo ka sii xun. Wuxuna ugu danbesiyay in ay amaan siiso.
Ruweyda wee naxday oo waxay is dhahay wa maxay Ilyaas sidaan mu ahan jirin. Waxay isku dayday inee ka dhadhaciso lakin asi wuu diiday. Kadib wey iska amustay waxay sameeso ayee garan weysay.
Labo beri kadib Ilyaas ayaa msj soo diray oo rali gilin oo dhahayo waa qaldamay iga rali ahaaw waa xanaqay. Si walba ayee ula hadashay oo dhinac walba aye ka tustay sida ay u jeceshahay oo marna ninkale ugu fikireenin nin aan asi ka aheyn.
Ilyaas waxaa ka soo haray maseer iyo xanaaq aan loo joogin. Xitaa wuxuu ka maseeri jiray Ruweyda wilkii ay yarantooda walalaha ahaayeen ena diriska ahayeen.
Ilyaas wuxuu hastay pasworka Ruweyda. Salaan xitaa hadii loo soo diro wuu iska xanaaqi jiray hadal walba oo xun afkiisa ka soo baxo wuu ku hadli jiray. Asigoo kontarool u yeleenin.
Ruweyda waxaa usoo kordhay murug iyo fikir. Waxay ka fikireysa sida uu isku badalay Ilyaas ,iyo dabeecadahaan qalafsan aysan ku ogeen uu la soo baxay. awelba waxay kaloo ka fikiri jirtay xaaskiisa oo furi dono darteeda. Waxay is dhihi jirtay xaskiisa iska daa u furaayo gabartiisa yariista ah maxay ka sameesay. Maxaa abaheeda iyo hoyadeeda ukala geneesa. Ruweyda waxay dareemi jirtay inee danbi weyn sameyneyso oona mar uun ILAAHAY ka jaraayo. Waxay kaloo is dhihi jirtay Ilyaas hada gabartiisa ma daneenaayo beri soo lagama yaabo in uu caruurtadana uu daryeelin. Madama uu cunug yar aan waxba ogeen uu saas u galaayo. Ruweyda wa ineey go,aan gaarta waa in ay jacelkeeda ka sabartaa ama in jacelkeeda hasata wixii beri la kulmi dontana xaga Ilyaas ugu sabartaa. Madama uu Ilyaas uu keenay isbadal xoogan.
Waxay is dhahday bal ukaday waa imtixanayaa waan arkaya hadii Ilyaas si dhab i jecelyahay iyo inkale.
Ilyaas ayey wacday waxay u sheektay iney doneynin iney danbi gasho oo u jeedo sida cunugtiisa u daryeleenin. Waxay ku dhahday xaskaaga ha furin lawadeena calaf waan isku lahaan weynay ee reerkaaga iskala joog.
Ilyaas wuxuu ugu jawabay ok xaskeega ma furaayo lakin adigana waa ku guursana.
Ruweyda waxay tiri taas surtagal ma noqoneyso walidkena ima ogolanaayo ee reerkaaga iskala joog. Ani waa ku jeclahay bes ma donaayo gabartaa yar inaa ka xaraan tariyo abaheeda.
Ilyaas intuu xanaaqay ayuu qeeliyay waxuu ugu jawabay na ma waxay kula tahay inaa naakteeda kuu furaayo adiga dartaa. Waa haweenkii xalay tagay. Markaas ayuu baqtiyay taleefonkii.
Ruweyda aad bey u xumatay oo maskaxdeeda waxa soo buxsamo su aalo badan oo jawaab la heen. Marna kama aysan filaneenin in uu Ilyaas sidaa u hadli dono. Horaa loo yiri “DAD ITO DUURBA WAX WALBOO KA FILO”. Waxay is weedisaa taloo ima jecleen miyaa, Haduu i jecleen muxuu iga rabey, Muxuu intaan dhan been igu sheegayay iyo kuwo nocaa oo kale. Lakin cid ugu jawaabtay malahan. Mar mar waxay is dhahda amuu lacagtaa uu jeclaa markii soo xasuusato inta jeer uu ka warsaday inee lacag u soo dirto. Ayadoo arday aheet iyo malinta isku horeesayba inuu dhahay bugaag qaali ah u dirsaday ay u dhiibtay.
Mudo kadib hadana Ilyaas wuu soo noqday asago calacalaaya oo dhahayo waa xanaqsana ee iga raali ahaw. Lakin Ruweyda niyadeeda wee ka goosay oo hadalada uu dhahay aya maskaxdeeda ka bixi la`yihiin.
Ruweyda wey ka diidatay xita MSNKeeda wee ka tirtirtay. Lakin Ilyaas wuxuu badana soo wici jiray taleefanka. Ruweyda waxay u sheektay ine rabin xiriirkiisa uu u yahay macalinkeeda horay bes oo wixii horay dhan uu dhamaday. Lakin asi waxaas dhan ma dhageesan jirin uu wuu soo wici jiray oo kaliya.
Waxaa soo galay fasaxii jamacada sida cadada u ahaan jirtay Ruweyda waxay aaday Dubay. Malin ayey waxey wacday saxibteeda oo isku iskulka ahayeen Soomaliya. Waxay wareesatay xalka dadka dhan. Ruweyda waxaa loo sheegay in macalin Ilyaas uu qabo labo naak ona kala jogaan labo magaalo.
Ruweyda aad bey u naxday kama fileynin sidaan inuu u galaayo. Ineey xanaaqday ayee msj u dirtay ayna ku dhahday. Waa maxay qayanimadaan labo naak ayaa qabtay maxa beenta igu shegeesay maxaa i qayaneesay maxaa iga rabtay?????
Ilyaas wuxuu ugu soo jawaabay is daji ee laba shegoosa afarna waa gursana ee adi maxaa kaa galay.
Ruweyda ilaa hada waxay fahmi ladahay sababta uu beentaas dhan u usheegayay. Iyo muxuu ka rabay .
Ruweyda waxay ka niyad jabtay wax la yiraahdo rag dhan markay araktay sida uu u xumeeyay Ilyaas oo marnaba ka filaneenin. Waxay go,aan ku gaartay inee wax barashadeeda wadaneyso ilaa mesha ugu sareeso.
Akhristoo su,asha mesha talo waxay tahay Ilyaas muu jeclaa Ruweyda si dhab ah mise lacakteeda ayuu jeclaa. Waxay doneesa Ruweyda inaa ogaato. Ra,yigiina waa inoo muhiim
waxaad inoogu soo gudbin kartaa wixii fikrad dheeri ah email adress
BY: Halima Haji
Comment by nasteha gabeyre on November 6, 2011 5:40 pm
walal anigu ra igeygu wa inu jeclaa lacagta ruweyda ,ruweyda ma usan jecleyn!
Jana Kula Wadagta QALBI JACEEYL GALAY MA QUUSTAA?!!! Q-2aad